ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: နောက်မျိုးဆက်တွေအပေါ် ကျူးလွန်သော ရာဇဝတ်မှု
ဒါပေမဲ့ အဲသလောက်ကြီးတဲ့ ရာဇဝတ်မှုကြီးတွေထက် ပိုကြီးတဲ့ ရာဇဝတ်မှုကြီးတွေ ရှိသေးတယ်။ အထက်မှာ ပြောတဲ့ ရာဇဝတ်မှုတွေ ဟာ သာမန် လူသတ်မှု ၊ မုဒိန်းမှုတွေထက် အဆရာထောင်ပိုမိုကြီးလေးတဲ့ ပြစ်မှုတွေဖြစ်ပေမဲ့ လက်ရှိ အသက်ထင်ရှားရှိတဲ့လူတွေသာ ခံစားရတဲ့ ပြစ်မှုတွေ ဖြစ်တယ်။ စစ်အာဏာရှင်တွေ ကျူးလွန်တဲ့ ဒီ့ထက် ပိုကြီးတဲ့ ရာဇဝတ်မှုတွေကတော့ မျိုးဆက် တစ်ခုတည်းမှာတင် ထိခိုက်နစ်နာရုံမကပဲ နောက်မျိုးဆက် အဆက်ဆက်အထိ ထိခိုက်နစ်နာတဲ့ ရာဇဝတ်မှုမျိုးတွေပဲ။ အဲဒီလို ပြစ်မှုမျိုးတွေကိုတော့ နောက်မျိုးဆက်တွေ အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ ရာဇဝတ်မှု (Crime Against Next Generations) လို့ သတ်မှတ်ရလိမ့်မယ်။
ပထမ တစ်ခုက ပညာရေးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ရာဇဝတ်မှု။ ကျောင်းသားတွေဟာ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို တစိုက်မတ်မတ် ဆန့်ကျင် ကန့်ကွက်ခဲ့တယ်။ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဟာ တိုင်းပြည်ကို ချောက်ထဲ ဆွဲချလိမ့်မယ်ဆိုတာကို ၁၉၆၂ ခု စစ်တပ် အာဏာသိမ်းပြီးပြီးချင်းမှာပဲ ၊ ချက်ချင်း ထောက်ပြခဲ့တယ်။ ကျောင်းသားတွေ ဦးဆောင်တဲ့ အဲဒီလှုပ်ရှားမှုဟာ ၁၉၈၈ မှာ အမြင့်ဆုံးကို ရောက်သွားတယ်။ ဒီတော့ စစ်အာဏာရှင် တွေဟာ ကျောင်းသားတွေကို အဆမတန် ဖိနှိပ်တယ်။ ကျောင်းတွေကို ပျက်စီးအောင် လုပ်တယ်။ ပညာရေး စနစ်တစ်ခုလုံးကို ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်။
“ဝေဖန်ရမယ့် နေရာမှာ မဝေဖန်တာဟာ ပြဿနာကို မလိုအပ်ဘဲ ပိုမို ကြီးထွားလာစေတယ်။ တကယ်လို့သာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က စောစောစီးစီးကတည်းက ဘာသာရေးအစွန်းရောက်စိတ်ဓာတ်ကို တားဆီးခဲ့မယ်ဆိုရင်၊ အမုန်းခံရမှာကို တကယ်မကြောက်ဘဲ၊ မဲမရမှာကို တကယ်မကြောက်ဘဲ အမှန်တရားအတိုင်း ပြတ်ပြတ်သားသား ရပ်တည်ခဲ့ရင် လူမျိုးရေးအစွန်းရောက်စိတ်ဓာတ်ဟာ ဒီလောက်ကြီးထွားလာမှာ မဟုတ်ဘူး။ အခုလောက်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လူမျိုးရေး အကြောင်းပြုပြီး ဆန့်ကျင်တဲ့လူတွေ များလာမှာ မဟုတ်ဘူး။ ခုတော့ ပြောသင့်တာကို မပြောခဲ့တော့ အခြေအနေဟာ ပိုဆိုးလာတယ်။ ပိုကြီးလာတယ်။ သူ့ကို ဆန့်ကျင်တဲ့လူလည်း ပိုများလာတယ်။ ညီညွတ်ရေးတွေလည်း ပိုပျက်ပြားလာတယ်။ ပြောသင့်တဲ့အရာကို ပြောသင့်တဲ့အချိန်မှာ မပြောခဲ့တဲ့ အကျိုးဆက်ပဲ။ ဒီအချိန်မှာ ပြောသင့်သလောက် မပြောရင် နောင် ပိုဆိုးဦးမယ်။”
ကျောင်းတွေကို အစိတ်စိတ် အမွှာမွှာလုပ်ပစ်လိုက်တယ်။ အရည်အချင်းပြည့်မီတဲ့ ဆရာတွေ အလုံအလောက်မရှိဘဲ ကျောင်းတွေကို အများကြီး ခွဲဖွင့်ပစ်လိုက်တယ်။ ဒီလိုလုပ်လိုက်ရင် ပညာရေး သိပ်နိမ့်ကျသွားမယ်ဆိုတာကို မသိမဟုတ်ဘူး။ သိတယ်။ သိရက်နဲ့ တမင်လုပ်တယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ကတစ်ခုတည်းပဲ။ ကျောင်းသားတွေ မစုစည်းနိုင်ဖို့ ၊ မညီညွတ်နိုင်ဖို့ တစ်နည်းအားဖြင့် ပြောရရင် စစ်အာဏာရှင်တွေ အာဏာ တည်မြဲဖို့ သက်သက်ပဲ။ ဒါတွင် မကဘူး။ ကျောင်းတွေကို မြို့ပြင် ထုတ်ပစ်တယ်။ ကျောင်းဆောင်တွေရှိပါရက်နဲ့ အဆောင်တွေ ဟောင်းလောင်းထား ပြီး ကျောင်းသားတွေကို အဆောင်မပေးဘဲ အပြင်မှာ ငှားနေခိုင်းတယ်။ ဒီလိုလုပ်တော့ ကျောင်းသားတွေ နေရေး ထိုင်ရေး အဆင်မပြေတော့ဘူး။ သွားရေး လာရေး အဆင်မပြေတော့ဘူး။ ဆင်းရဲတဲ့ ကျောင်းသားတွေ ကျောင်းမတက်နိုင်တော့ဘူး။ ဒါကို သူတို့ မသိတာ မဟုတ်ဘူး။ သိတယ်။ သိလို့ လုပ်တာပဲ။ အဲဒါ သူတို့ အကြိုက်ပဲ။ ဖြစ်နိုင်ရင် တက္ကသိုလ်မှာ ကျောင်းသားမရှိရင် အကောင်းဆုံးပဲလို့ သူတို့ သဘောထားကြတယ်။ တက္ကသိုလ်မှာ ကျောင်းသား မရှိရင် သူတို့ အာဏာကို စိန်ခေါ်မယ့်သူ မရှိတာပဲလို့ သဘောထားကြတယ်။ ဒါတွင် မကသေးဘူး။ ၈၈ အရေးအခင်းပြီးတဲ့ နောက်မှာ တက္ကသိုလ်တွေထဲမှာ နံပါတ်ဖိုး အဖြူ ဝယ်လို့ရလာတယ်။ ဒါကိုလည်း သူတို့ လစ်လျူရှုထားတယ်။ ကျောင်းသားတွေ ပျက်စီးတာကို သူတို့ လုံးဝ မပူပန်ဘူး။ ကျောင်းသားတွေ နိုင်ငံရေး လုပ်မှာကိုပဲ သူတို့ ပူပန်စိုးရိမ်တယ်။ နောက်ထပ် ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာ ရှိသေးတယ်။ ၈၈ နောက်ပိုင်းမှာ ကျောင်းသူတွေထဲမှာ ပြည့်တန်ဆာလုပ်စားတဲ့လူ ရှိလာတယ်။ တော်တော်များများ ရှိလာတယ်။ ဒါကိုလည်း သူတို့ စစ်အာဏာရှင်တွေ ဝမ်းမနည်းတတ်ဘူး။ ၈၈ အရေးအခင်းပြီးကတည်းက ကျောင်းတွေမှာ စာမေးပွဲ စာခိုးချတာကိုလည်း ခိုးချင်ခိုး ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ ကျောင်းသားတွေ ပျက်စီးမယ့်အရာ၊ ပညာရေး ပျက်စီးမယ့်အရာမှန်သမျှ ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ တိုင်းပြည်ကို ချောက်ထဲကျဖို့ လက်နှစ်လုံးအလိုမှာ ကယ်တင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့လက်ထက်မှာ ပညာရေးဟာ ပြန်ဆယ်လို့ ပြန်ကယ်လို့ မရနိုင်လောက်တဲ့ အသူတရာ ချောက်ကြီးထဲအထိ ကျသွားခဲ့တယ်။ ဒါကို သူတို့ မသိတာ မဟုတ်ဘူး။ သိပ်သိတယ်။ သူတို့ အသိဆုံးပဲ။ သိလွန်းလို့လည်း သူတို့ သားသမီးတွေ ဆိုရင် ဘယ်ဝန်ကြီးမှ ဗမာပြည်မှာ ပညာ မသင်ခိုင်းကြတော့ဘဲ နိုင်ငံခြားပို့ပြီး ပညာသင်ခိုင်းကြတာကိုသာကြည့်တော့။ ဒီလောက်ဆိုးသွားတဲ့ ပညာရေးကို ၈၈ မတိုင်ခင် အခြေအနေ အဆင့်အတန်း ပြန်ရောက်ဖို့တောင် နှောင့်ယှက်သူမရှိဘဲ အပြင်းအထန်ကြိုးစားခွင့်ရသည့်တိုင် အနည်းဆုံး ဆယ်နှစ်လောက် အချိန်မယူဘဲ မရနိုင်တော့ဘူး။ လူငယ်မျိုးဆက် တစ်ဆက်လုံးဟာ ပညာရေး နိမ့်ကျတဲ့ မျိုးဆက်တစ်ဆက် ဖြစ်သွားတယ်။ ဒီပြစ်မှုဟာ လူငယ်မျိုးဆက် တစ်ဆက်လုံးအပေါ်မှာ ကျူးလွန်တဲ့ ရာဇဝတ်မှုကြီးဖြစ်တယ်။ အသက် ၂၀ ၊ ၃၀ အရွယ်လူငယ်တွေကို စစ်အာဏာရှင်တွေ မသေခင် နေ့တိုင်း ရှိခိုး တောင်းပန်ရင်တောင် မကျေနိုင်တော့တဲ့ ပြစ်မှုကြီးပဲ။ ဒီပြစ်မှုအတွက် တာဝန်ရှိသူက စစ်အာဏာရှင်တွေ အားလုံးပဲ။ လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ယောက်ချင်းအနေနဲ့ အပြစ်အရှိဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်ကို လက်ညှိုးထိုးပြပါဆိုရင် အဲဒီလူဟာ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်ပဲ။ အဲဒီလို ပညာရေးစနစ်ဖျက်ဆီးရေးကို တာဝန်ယူ အကောင်အထည် ဖော်ခဲ့သူဟာ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်ပါ။
နောက်မျိုးဆက်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ Crime Against Next Generation နံပါတ် ၂ ကို အခုပြောပါမယ်။ ဒီပြစ်မှုက စောစောက ပြစ်မှုထက် ပိုကြီးတယ်။ အဲဒီပြစ်မှုကတော့ တနိုင်ငံလုံးပြည်သူတွေရဲ့ အကျင့်စာရိတ္တကို ဖျက်ဆီးတဲ့ ပြစ်မှုပဲ။ အခုဗမာနိုင်ငံမှာ လာဘ်မစားဘူးတဲ့ ဝန်ထမ်းမရှိဘူးလို့ ပြောရင် ဘယ်သူငြင်းရဲသလဲ။ တချို့က ပြောလိမ့်မယ်။ ဒို့တစ်သက်မှာ တစ်ခါမှ လာဘ်မစားဖူးပါဘူး။ သူတို့ သဒ္ဓါလို့ စေတနာ အလျောက် ပေးတဲ့ လက်ဆောင်လေးတော့ ယူဖူးတယ်လို့....။ လက်ဆောင်ယူတာဟာ လာဘ်စားတာပဲ ဆိုတာ တချို့က မသိကြတော့ဘူး။ တချို့ကျတော့ သိတော့ သိပါရဲ့။ မသိဟန်ပြုပြီး သူတို့စိတ်သူတို့ ဖြေသိမ့်ကြရတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ညာကြရတယ်။ အင်မတန် စိတ်နာဖို့ကောင်း တယ်။ ဝန်ထမ်းတွေကို ခိုးမစားရင် ထမင်းမဝတဲ့ ဘဝရောက်အောင် သူတို့ စစ်အာဏာရှင်တွေ သိသိကြီးနဲ့ တွန်းပို့ကြတယ်။ မလောက်မငှ လစာနဲ့ ပစ်ထားကြတယ်။ သူတို့တတွေ စိန်စီသောည လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ ဗမာပြည်သူတွေ ချွတ်ခြုံကျငတ်မွတ်နေတာကို မသိယောင်ပြုခဲ့ကြတယ်။
လာဘ်ပေးလာဘ်ယူစနစ်ဆိုတာ ပျက်စီးတာ corruption လို့ နိုင်ငံတကာမှာ ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲတယ်။ ပျက်စီးတယ်ဆိုတာ လာဘ်ယူတဲ့လူတွင် ပျက်စီးတာ မဟုတ်ဘူး။ လာဘ်ပေးတဲ့လူရဲ့ စာရိတ္တလည်း ပျက်စီးတာပဲ။ လာဘ်ပေးတယ်ဆိုတာ သူများထက် အခွင့်အရေး မတရား ပိုလိုချင်လို့ ငွေကြေးအသုံးပြုပြီး အခွင့်အရေးယူတာပဲ။ ဗမာပြည်မှာ တချို့က လာဘ်ယူတဲ့လူကိုသာ အကျင့်ပျက်တယ်လို့ ထင်ပြီး လာဘ်ပေးတဲ့လူကိုတော့ လူကြီးလူကောင်းလို့ထင်ကြတယ်။ ဒါမှားတယ်။ လာဘ်ပေးတဲ့လူရော လာဘ်ယူတဲ့လူရော အတူတူ အကျင့်ပျက်တဲ့လူပဲ။ တကယ်တော့ လာဘ်ပေးတဲ့လူက ပိုတောင်ဆိုးသေးတယ်။ လာဘ်ယူတဲ့လူက မလွှဲသာလို့ ထမင်းငတ်မှာစိုးလို့ ယူရတယ်။ လာဘ်ပေးတဲ့လူက ငွေရှိပါရက်နဲ့ ပျက်စီးတာ။ ဆိုးချင်ဆိုး ပေးတဲ့လူက ပိုဆိုးဦးမယ်။ ကဲ... မေးပါရစေ။ ဗမာပြည်မှာ အရွယ်ရောက်သူ အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးသူထဲမှာ လာဘ်မပေးဘူးတဲ့လူ ဘယ်နှယောက်ရှိသလဲ။ အလုပ်လုပ်ဖူးသူမှန်သမျှ လာဘ်ပေးဖူးကြတယ်ဆိုတာ ဝန်ခံကြရလိမ့်မယ်။ လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ လာဘ်ပေးသူနေရာကဖြစ်စေ၊ လာဘ်ယူသူနေရာကဖြစ်စေ တစ်နေရာရာမှာ နေခဲ့ကြဖူးသူတွေချည်းပဲ။ ဒီတော့ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူစနစ်ဆိုတာကို ပျက်စီးမှုလို့ နိုင်ငံတကာက သတ်မှတ်ထားတဲ့ စံချိန်နဲ့ တိုင်းတာကြည့်ရင် ဗမာပြည်မှာ လူကောင်းဆိုတာ ရှိသေးရဲ့လား။ မခိုးဖူးတဲ့လူ၊ သူခိုးအားပေး မလုပ်ဖူးတဲ့လူရှိသေးရဲ့လား။ ဒီတိုင်းပြည်ကြီးကို သူခိုးတိုင်းပြည်ကြီးလို့ နိုင်ငံတကာက ပြောမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လို ဖြေရှင်းကြမလဲ။ ဒီလို ခိုးလို့ လာဘ်စားလို့ဆိုပြီး သူတို့ကိုရော အပြစ်တင်လို့ ရမလား။ ထိပ်ဆုံးက သူခိုးကြီးတွေကြီးပွားကောင်းစားနေပုံနဲ့ သူတို့ငတ်နေပုံကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့် ရင် သူတို့ကို ဘယ်လိုမှ အပြစ်တင်လို့ မရတော့ဘူး။ ဂုဏ်သရေရှိ သူဌေးမင်းကြီးတွေဆိုတဲ့ ခရိုနီကြီးတွေက တိုင်းပြည်ရဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံးပြည်သူတွေ ပိုင်တဲ့ ရွှေငွေ သတ္တု သယံဇာတတွေ၊ သစ်ပင်တွေ၊ ငါး၊ ပုဇွန်တွေကို ရောင်းစားခွင့်ရဖို့ သူများထက် အခွင့်ထူးရဖို့ ၊ အချောင်နှိုက်ဖို့ စစ်အာဏာရှင်တွေဆီ လာဘ်ထိုးကြတယ်။ စစ်အာဏာရှင်တွေက သူတို့ မပိုင်တဲ့ ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းကို သူတို့ ပိုင်ဆိုင်လေဟန် ခွင့်ပြုလက်မှတ်ထိုး ပေးပြီး ခရိုနီတွေ ပေးတဲ့ လာဘ်ကိုယူတယ်။ ဒီငွေတွေကြောင့်သာ သူတို့မှာ စိန်စီသောည လုပ်နိုင်တာပဲ။
ပြည်သူတွေကတော့ ငတ်လွန်းလာတော့ ချဲထီ၊ နှစ်လုံးထီ၊ ဘောလုံးလောင်းကစားတွေလုပ်လာတယ်။ စိတ်ဓါတ်တွေ ပျော့ညံ့လာတယ်။ ပျက်စီးလာတယ်။ အကျင့်စာရိတ္တပျက်စီးလာတယ်။ ဒါကိုလည်း အားပေးထားတယ်။ သူတို့က ထီတွေတောင် ထပ်ဖွင့်ပေးလိုက်သေးတယ်။ နှစ်လုံးထီ၊ သုံးလုံးထီတွေကို ဖမ်းနေပါသကောလို့ တချို့က ဆင်ခြေပေးလိမ့်မယ်။ တကယ် နှိမ်နင်းသလား ၊ ဟန်ပြဥပဒေထုတ်ပြီး လိုရင်လိုသလို မလိုရင် မလိုသလို လုပ်လို့ ရအောင် လုပ်ထားတာလားဆိုတာ အသိသာကြီးပါ။ တိုင်းပြည်မှာ လူငယ်တွေ၊ မူးယစ်ဆေးသုံးတာ၊ အရက်သေစာ သောက်စားတာတွေ တိုးပွားလာလိုက်တာကလည်း ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေ လက်ထက်မှာ သိသိသာသာကြီးပဲ။ ဒါတွေကိုလည်း မတားဘူး။ မဆီးဘူး။ တားပါတယ်၊ မနိုင်လို့ပါလို့ ဆင်ခြေပေးလို့ မရဘူး။ နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားတက်ကြွသူတွေကို သူတို့ ဘယ်လို နှိမ်နင်းတယ်ဆိုတာ မမေ့ကြပါနဲ့။
သူတို့ ဘာကြောင့် ဒီလိုလုပ်သလဲ။ ၂၀၁၅ မှာ မဲရအောင်လုပ်နေတာပဲ။ သူတို့ကို တစ်နိုင်ငံလုံးက မစင်ထက် ရွံရှာနေပြီ။ သူတို့ မဲရဖို့ မလွယ်ဘူး။ ဘယ်လိုမှ မလွယ်ဘူးဆိုတာကို ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်က သက်သေပြခဲ့ပြီးပြီ။ ဒီတော့ မွတ်စလင်နဲ့ ရခိုင်အရေးကို စဖော်တယ်။ အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး စိတ်ဓါတ် အင်မတန် ပြင်းထန်တဲ့ ရခိုင်ပြည်သူတွေက သမ္မတကြီးကို ထောက်ခံတယ်တို့ ၊ တပ်မတော်က တို့ဘက်မှာ ရပ်တည်တယ်တို့ ပြောလာတဲ့အခါကျတော့ သူတို့ တော်တော် အားရသွားတယ်။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက ရိုဟင်ဂျာတွေဆီက ကြံ့ခိုင်ရေးက မဲဝယ်ခဲ့တာကိုလည်း သတိရကြဦးမယ်ထင်တယ်။ ခုတော့ ရခိုင်ဆီက မဲကိုရရင် ပိုပြီးတွက်ချေကိုက်တယ်ဆိုတာ သူတို့ မြင်သွားတယ်။
မွတ်စလင်တွေက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆီမှာ အကူအညီသွားတောင်းတော့ ရခိုင်တွေနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေက ကန့်ကွက်ပြောဆိုကြတာတွေကို ကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ နိုင်ငံရေး လုပ်စားလာတာ အံတိုနေပြီ ဖြစ်တဲ့ စစ်အာဏာရှင်တွေဟာ အကွက်ကို လှစ်ကနဲ ပြေးမြင်လိုက် ကြတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ သူတို့ရဲ့ ရန်သူနံပါတ်တစ်ဆိုတာကို တစ်စက္ကန့်ကလေးမှ သတိမမေ့တဲ့ စစ်အာဏာရှင်တွေဟာ ဒီအကွက်ကို အမိအရ အသုံးချတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ လူများစု ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ပြည်သူတွေအကြားမှာ သပ်လျှို သွေးခွဲဖို့ အကောင်းဆုံး နေရာဟာ ဒီနေရာပဲ ဆိုတာသူတို့ သိသွားတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ ဆန့်ကျင်ဖို့ စစ်အာဏာရှင်တွေကို လူတွေ ထောက်ခံလာဖို့ ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းတွေ များများ ဖန်တီးပေးတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း ဒါကိုမြင်တယ်။ ဒါကိုမြင်တော့ မွတ်စလင်တွေကို မတရားဖိနှိပ်တာတွေကို ဝင်မပြောဘဲ ရှောင်တယ်။ မိတ္ထီလာမှာ ရဲတွေက မတော်မတရား လက်ပိုက်ရပ်ကြည့်နေတာကို သိရက်နဲ့တောင် မဝေဖန်ဘဲ ရေငုံခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဝေဖန်ရမယ့် နေရာမှာ မဝေဖန်တာဟာ ပြဿနာကို မလိုအပ်ဘဲ ပိုမို ကြီးထွားလာစေတယ်။ တကယ်လို့သာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က စောစောစီးစီးကတည်းက ဘာသာ ရေး အစွန်းရောက်စိတ်ဓါတ်ကို တားဆီးခဲ့မယ်ဆိုရင် ၊ အမုန်းခံရမှာကို တကယ်မကြောက်ဘဲ၊ မဲမရမှာကို တကယ်မကြောက်ဘဲ အမှန်တရား အတိုင်း ပြတ်ပြတ်သားသား ရပ်တည်ခဲ့ရင် လူမျုိးရေး အစွန်းရောက်စိတ်ဓါတ်ဟာ ဒီလောက်ကြီးထွားလာမှာ မဟုတ်ဘူး။ အခုလောက်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လူမျိုးရေး အကြောင်းပြုပြီး ဆန့်ကျင်တဲ့လူတွေ များလာမှာ မဟုတ်ဘူး။ ခုတော့ ပြောသင့်တာကို မပြောခဲ့တော့ အခြေအနေဟာ ပိုဆိုးလာတယ်။ ပိုကြီးလာတယ်။ သူ့ကို ဆန့်ကျင်တဲ့လူလည်း ပိုများလာတယ်။ ညီညွတ်ရေးတွေလည်း ပိုပျက်ပြားလာတယ်။ ပြောသင့်တဲ့ အရာကို ပြောသင့်တဲ့အချိန်မှာ မပြောခဲ့တဲ့ အကျိုးဆက်ပဲ။ ဒီအချိန်မှာ ပြောသင့်သလောက် မပြောရင် နောင်ပိုဆိုးဦးမယ်။
အစိုးရဟာ ဒါတွေအားလုံးကို အကွက်ချလုပ်ခဲ့တာပဲ။ လူတွေရဲ့ စိတ်ထဲကို လူမျုိးရေး ဘာသာရေး အပင်းထည့်ခဲ့တာပဲ။ ခုဆိုရင် ကမ္ဘာမှာ နိုင်ငံနဲ့ လူမျိုးတစ်ခုလုံး သိက္ခာကျဆင်းတဲ့ အခြေအနေထိ ရောက်သွားတယ်။ တချိန်က ဂျာမဏီ၊ ဂျပန်တွေကို လူတွေက ဖက်ဆစ်ဆိုပြီး မုန်းသလိုမျိုး မုန်းဖို့ အစပျိုးလာနေတယ်။ ကြာလာရင် ဒါတွေဟာ အိန္ဒိယမှာ ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းကြီးဖြစ်သလိုမျိုး ၊ ဆူဒန်မှာ ကျေးရွာတစ်ရွာနဲ့ တစ်ရွာ အပျောက်ရှင်းသတ်ဖြတ်ကြသလိုမျိုး၊ ရဝမ်ဒါမှာ အပြတ်ရှင်းကြသလိုမျိုး အင်မတန် နာကြည်းကြေကွဲ စရာတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ အဲသလို အဖြစ်တွေ တစ်ချိန်မှာ ဖြစ်လာဖို့ အစပျိုးနေတဲ့ အခြေခံအကြောင်းတရားတွေပဲ။
ဇွန် ၁။ ၂၀၁၃။ စနေနေ့
(Zaw Win ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှ မူရင်းသတ်ပုံအတိုင်း ကူးယူဖော်ပြသည်။)
အဲဒီမိတ်ဆာကောင်တွေအားလုံးကို ၈၈ မျိူးဆက်တွေကဖြုတ်နိင်တဲ့
i do not see Daw Suu can lead that way like her father,
we needareal brave(man) leader who can lead big battle.
There isabig slogan for Burmese citizen "No Pain No Gain" fight for your own freedom.
Do not forget the firt hand teacher
of military gangster,JUNTA NE WIN
he conducted uncountable criminal to the citizens.
He is the worst evil in BURMESE HISTORY.
HE IS THE TEACHER OF GANGSTER.
I aware and observe most of zaw win's articles. I am not crazy about his idea but just want to know his point of view on myanmar politics. The problem is himself, he may assumed himself too smart and master of all trades. But practically nothing. Not more thanasilly dog barking at grape plant.
We shall remove the Military Governors!
ဇော်ဝင်းရယ်။ နင်အဲဒီလောက် သိနေရင် ပြန်ပြီး ပါတီထောင်ပါလား။
Mino Fro said...
Junata, Dictator, Crime , Human Right.
That is all what you people think.
Where is national seurity and purity.
Kalar Zaw Win feel sorry for your people ?
We Burmese hate muslims more than anything. We hate Junta.But we hate muslims 100 times more. So stop lecturing.
88 generation once had their glory, but no more.
People Hate Moethee, Naing Aung and you , Zaw Win at the same level they hate than shwe.
Ko Ko Gyi and Min KO Naing are the only hope. BUt they made mistake by telling that school should teach about4religion.
Mya Aye is hopeless because he is muslim.
So hahaha how can 88 overthrow currently quasi-civilian Govt.It is like replacing disciplined dictators with undisciplined dictators. ABSDF already proved they can be more cruel and ruthless than army.
You Give us examples,so i will add some more details.
In Rwanda, Muslim Hutu did genocide on Christian Tutsi.
In India, Indians Hindu and Muslim clash(most sever in Gujarat)
In Sudan, Muslim Arabs oppress southern Christian and animist sub-saharan black africans.
In additions, in muslim majority countries.
Egypt muslims kill Coptic Egypts.
Assyians face ethnic cleansing in Iraq.
Indonesians opress Papuans, minahasa and indigenous people.
Malay give no political power to its 30% chinese population.
Bangaladeh caused atrocities against CHT, chakma people.
Northern Nigeria, Southern Phillipine, Southern Thailand, Cheychen and Dagestan in Russia
Where on earth, these muslims can live peacefully with other. So stop lecture us about religious conflicts are staged. Even if it is staged, it happen because of muslims.
One thing , what is your opinion on illegal opportunistist immigration of Bengali into Rakhine.
စိတ်ကူးယာဉ် ဝထ္ထုလေး ဖတ်လို့တော့ကောင်းသား
saung wintun said...